7-da barnaamij ee wararka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android | Androidsis
Ignacio Sala | 04/06/2021 18:00 | Codsiyada Android, Noticias
Aaladaha mobilada ayaa noqday aaladaha ay isticmaalaan malaayiin dad ah maalin kasta, gaar ahaan kuwa aan waqti ku qaadanin kumbuyuutarka hortiisa, maadaama ay tahay isha ugu weyn ee isgaarsiinta iyo waliba macluumaadka, ilaa iyo inta aan isticmaalno codsiyada ku habboon.
Haddii aan dooneyno in nala ogeysiiyo marwalba wararka ugu dambeeya ee mowduucyada sida aadka ah noo xiisaynaya, muhiim maahan inaan marinno bogagga wargeysyada, laakiin waxaan adeegsan karnaa codsiyo mas'uul ka ah ururinta wararka. sida ku xusan dookhyadayada aan horay u dhidibnay.
Sannadkii la soo dhaafay, qaar badan oo ka mid ah wargeysyadan ayaa sameeyay darbi lacag bixin ah, oo ah darbi xaddidaya helitaanka macluumaadka ay bixiyaan, sidaa darteed waxay joojiyeen inay noqdaan, adeegsadayaal badan, ilo macluumaad oo la booqdo.
Dukaanka Play-ka waxaan gacanta ku haynaa tiro badan oo xulashooyin ah oo isla markiiba lagu ogeysiiyo wax kasta oo aan jecel nahay iyadoo lagu saleynayo dookhyadayada. Haddii aad ku daashay booqashada had iyo jeer isla boggaga isla raadinta macluumaadka la xiriira, markaa waan ku tusi doonaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee barnaamijyada loogu talagalay Android.
2 Google ogaada
3 Wararka Microsoft
8 Eexyada warbaahinta
Isbedelada Twitter-ka, oo Facebook iyo aalado kale ay isku dayeen inay nuqul ka sameystaan ​​iyagoon guuleysan, ayaa noo ogolaanaya inaan ogaano waqti walba, waa maxay wararka ugu muhiimsan aduunka iyo wadankeena.
Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay nidaam talo soo jeedin ah, oo ku saleysan xisaabaadka aan raacno, waxay na siisaa xisaabaadyo xiiso noo leh. Iyada oo loo marayo hashtags, waxaan ka raadin karnaa macluumaad gaar ah mowduucyada, dadka, aaladaha, shirkadaha ...
In kasta oo la waayey Warkii Google ee Isbaanishka dhawr sano ka hor, haddana shirkadda weyn ee raadinta ayaa Google Discover nooga heli doonta annaga oo u marayna barnaamijka Google. Qaybtani waxay ina tusaysaa wararka la xiriira taariikhdeena daalacashada, in kasta oo aan sidoo kale aasaasi karno kuwaas oo ah mawduucyada inta badan ma jecli inaad ururiso macluumaad ku saabsan.
Mid ka mid ah awooda barnaamijkan ayaa ah inaan ka takhalusi karno talooyinka ay na tusayso haddii aanaan jeclaan iyaga oo keliya inkasta oo laga fikirayo gudahood mawduuca aan dooranay.
Tusaale ahaan, waxaan jecel nahay filimada laakiin runtii ma jeclin Angelina Jolie. Markaad muujineyso warka ku saabsan atariishadan, xulashada wararka xulan maayo xiisaha aan u qabo Angelina Jolie. Sidaas darteed, war la xiriira waligiis lama soo bandhigi doono iyada oo atariishadan ay cinwaankeedu yahay qodobka wararka.
Iyadoo loo marayo Microsoft News waxaan ka helnaa warar jab iyo warbixinno faahfaahsan oo ka socda saxafiyiinta adduunka ugu fiican. Waxay noo ogolaaneysaa inaan dhisno warbaahinta wararka ee lagu soo bandhigi doono quudkeena, oo ay ku jirto xulashada qari wararkaas xiisaha inoogu yar.
Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ka raadinno sawirada kamaradeena adoo soo gelinaya sawir, hubinaya cimilada, isboortiga, fiidiyowyada iyo sawirada noocyadooda oo dhan, waxaa ku jira tarjumaan iyo sarifle iyo suurtagalnimada in laga doorto tiro badan oo waraaqo sawiro ah. Microsoft ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash waxaana ka mid ah xayaysiisyada.
Feedly waa akhristaha RSS. Inta badan bogagga shabakadda waxaa ka mid ah quudinta RSS, halkaas oo xiriiriyeyaasha dhammaan wararka ay daabacaan lagu dhejiyo. Waxaan ku dari karnaa RSS quudintan Feedly sidaa darteed wuxuu ina tusayaa wararka oo dhan laga soo xigtay ilaha barnaamijka.
Waxay kuxirantahay bogga shabakada asalka ah, xaalado badan, qoraalka oo dhan wuxuu kujiraa arjiga, sidaas darteed muhiim maahan inaad booqato websaydhka su'aasha laga qabo si aad u aqriso
Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa u abaabulo dhammaan noocyada noocyada kala duwan, sidaa darteed waxaan kaliya xiiseyneynaa isboortiga iyo tikniyoolajiyadda, waxaan ka heli karnaa waxa ku jira inta aan ka sugeyno akhrinta wararka ka socda shineemooyinka iyo telefishanka.
Quudin ayaa laga heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash si kastaba ha noqotee, waxay isku dhafan tahay taxane iibsiyo gudaha ah oo ku daraya shaqooyin dheeri ah, shaqooyinka inta badan isticmaalayaashu aysan waxtar lahayn.
Feedly - Akhristaha Akhriska Wanaagsan
Developer: Kooxda Quudinta
Waraaqda loo yaqaan 'Flipboard' waxaa loo tixgelin karaa Quud-qurux badan. Codsigan wuxuu ina tusayaa dhammaan ilaha ku jira qaabka majaladda in aan hore u dhisnay, ilo noqon kara koonto Twitter ah, RSS quudin, koonto Facebook ah ...
Iskuxirka Flipboard-ka ayaa ah mid soo jiidasho leh oo si fudud loo isticmaali karo. Haddii aad rabto inaad ka hesho macluumaadka aad ugu jeceshahay qaabka joornaalka taleefankaaga casriga ah ama kaniinigaaga, sida arjiga Flipboard, ma heli doontid mid kale. Foodh-boodhka ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash waxaana ka mid ah xayaysiisyada.
Haddii aadan jeclayn codsiyada guud in lagu ogeysiiyo waqti kasta waxa aad ugu jeceshahay, waxaad siin kartaa Squid fursad, codsi ayaa noo oggolaanaya inaan kala dhex dhigno in ka badan 100 qaybood oo ka kala socda in ka badan 40 dal.
Ciyaaraha, moodada, teknolojiyada, wararka adduunka, cuntada, sayniska, safarka, sawir qaadista… Ma waxaan ka mid nahay qeybaha kala duwan ee aan gacanta ku heyno si aan u shaandheyno waxyaabaha aan dooneyno in lagu soo bandhigo arjiga.
Inta ugu fiican, waan awoodnaa Xullo nidaamka aan dooneyno in qaybaha loo soo bandhigo, si aan marka hore u dejino wararka aan aad u xiiseyno aqrinta marka hore. Haddii aynaan jeclayn mid ka mid ah ilaha lagu soo daray qaybaha, waanu ka takhalusi karnaa isha macluumaadka.
Hawl aan ka heli karin inta ka hartay codsiyada aan kor ku soo sheegay, waa suurtagalnimada soo sharax warka. Waxay kudarsaneysaa widget shaashadda guriga waxaana loo heli karaa soo dejisan gebi ahaanba bilaash (waxaa ku jira xayeysiiska).
SQUID - Wararka
Developer: Qalabka Squid
Haddii af Ingiriisiga uusan adiga dhibaato kugu ahayn oo aad rabto in lagugu wargeliyo gacantaada koowaad mid ka mid ah ilaha macluumaadka ee ugu weyn adduunka, waxaad isticmaali kartaa Reddit. On Reddit waan awoodnaa ka hel macluumaad daqiiqad-daqiiqad ah mowduuc kasta Iyada oo loo marayo xiriiriyeyaasha ay isticmaaleyaashu wadaageen iyo in, munaasabado badan, ay ku kaabayaan khabiiro berrinka.
In kasta oo markii hore hawlgalkeedu u muuqdo xoogaa dhib badan, haddii waxaad qaadataa waqti kugu filan hubi waqti aad u yar sida Reddit u yahay codsi aad u xiiso badan in lagugu wargeliyo wax kasta oo aad ugu jeceshahay.
Isticmaale kastaa wuu ka duwan yahay, wuxuu leeyahay eexasho gebi ahaanba ka duwan oo badanaa wuxuu booqdaa ilaha macluumaadka sida ay doorbidayaan, sidaa darteed waxaan go'aansaday ha ku darin ilo gaar ah oo ka imanaya bogag ama joornaallo gaar ah.
Haddii aad rabto inaad macluumaad kala duwan ka hesho dhammaan noocyada ilaha iyo fikradaha, codsiyada aan ku muujiyey maqaalkani waa kuwo fiican. Si kastaba ha noqotee, hadaad jeceshahay wararka leh siyaasad, isboorti ama nooc kale oo eex ahSida iska cad, iyada oo kuxiran fikirkaaga, waxaad kala soo bixi kartaa arjiga dhexdhexaadintaas ama waxaad booqan kartaa degelkeeda bogga hoyga qalabkaaga sida toobiye.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 7-da barnaamij ee wararka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
MatePad 11 iyo MatePad Pro: Harmony OS iyo naqshad heer sare ah